Urur dhallinyaro oo ku dhawaaqay wax ka qabashada Soomaali ku dhibaataysan Koonfur Afrika”sawiro” – Radio Muqdisho
Naadiga dhalinyarada Hiilo ayaa magaalada Cape Town waxaa ay ku qabteen kulan looga hadlayay arrimaha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaaladaasi gaar ahaan kuwa noqday darbi Jiifka iyo kuwa u baahan caawinta dhanka waxbarashada ayada oo kulanka ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kulankaan oo ahaa mid ay si heer sare ah u soo agaasimeen ururka dhalinyarada Hiilo ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Cape town Ee dalka South Africa ayaa waxaa ka soo qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada waxgarad aqoon yahano iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Western Cape .
Ujeedka kulanka ay u soo agaasimeen Naadiga dhalinyarada Hiilo waxaa uu ahaa in bulshada u soo bandhigeen waxqabadkii naadiga iyo arrimaha ay hiigsanayaan waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen sida ay u doonayaan in ay diirada u saaraan wax ka qabashada arrimaha dhalinyarada gaar ahaan kuwa darbi jiifka ah iyo kuwa u baahan in laga caawiyo waxbarashada.
Marti sharaftii kala duwanaa ee goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay howsha ay hayaan naadiga Hiilo iyo qorshooyinka ay damacsan yihiin waxaana ay balan qaadeen in ay garab kusiin doonaan howl walba oo looga baahdo.
Afhayeenka Naadiga Hiilo Cabdi Qadar Maxamed Cali “Ugaas Qadar” ayaa sheegay in howsha ay wadaan ay tahay mid samafal ah oo loogu tala galay dhalinyarada ku lumay isticmaalka maandooriyaha iyo kuwa ku biiray darbi jiifka ee ku nool magaalada cape town.
Guddoomiyaha Dhalinyarada Naadiga Hiilo ayaa balan qaaday in ay xooga saari doonaan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhalinyarada ku lumay daroogada iyo wax la midka ah.
kulankaan ayaa waxaa uu ku soo aadayaa xilli mudooyinkii dambe ay sii badanayeen dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town oo ku biiraya nolosha dayacan ee darbi jiifka,waxaana qaarkood ay dhibaato ku hayaan dadka ku nool xaafada Ay Soomaalidu ku badan tahay Bellville.
Wariye C/laahi Amin Qorshe ee Cape Town
Barlamaanka Soomaaliya oo beri la horgeyn doono Ra’iisulwasaare Cumar C/rashiid"sawiro"